Ampidino CSR Racing 2 APK ho an'ny Android
Ampidino CSR Racing 2
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (61.00 MB)
Ampidino CSR Racing 2,
CSR Racing 2 no lalao drag racing farany tsara indrindra aminny sehatra Android, na aminny fahitana izany na aminny resaka gameplay. Miezaka ny manaporofo izahay fa izahay no mpihazakazaka tsara indrindra ao an-tanàna aminny lalao, izay ahitana maherinny 50 mahery haingam-pandeha haingam-pandeha. Mazava ho azy fa tsy mora ny mifaninana mifanatrika aminny tsara indrindra.
Ao aminny lalao izay andraisantsika anjara aminny hazakaza-tsoavaly mahatalanjona sy mihantona miaraka amina fiara 50 manana fahazoan-dàlana ofisialy avy aminireo mpamokatra fiara be mpitia indrindra eto an-tany, anisanizany i Ferrari, McLaren, Bugatti, Lamborghini, Pegani, Koenigsegg, miara-miasa na mifanohitra aminireo namantsika, ary manodidina. izao tontolo izao. Afaka mifaninana aminireo mpilalao isika. Manana fotoana hiresahana mivantana aminireo mpilalao mivantana ihany koa isika, mamorona ekipa ary mandray anjara aminireo hetsika an-tserasera. Misy ihany koa ny maody asa izay manomboka toy ny rookie ary mifarana ho toy ny hazakazaka dragona matihanina.
Ao aminny CSR Racing 2, izay manintona ny saina miaraka aminny fanovana aminny antsipiriany sy ny safidiny manokana, azontsika atao ny mampiseho ireo fiara azontsika taminny fahombiazana lehibe azontsika taminireo hazakazaka tao aminny galeriantsika manokana. Ny fiara fanatanjahan-tena manintona indrindra dia miandry antsika ao aminny garazinay lehibe, vonona ny hampiasaina aminny fotoana rehetra.
Ny mpanonta ny lalao, Zynga, dia nanambara vao tsy ela fa hisy fanavaozana ny lalao, izay antsoinizy ireo hoe CSR2 Legends. Raha manome ny vaovao tsara fa fiara vaovao 16 no hanampy aminny lalao miaraka aminny fanavaozana vaovao, dia voalaza fa ny customization dia azo atao ao aminny lalao ankehitriny. Raha lazaina aminny teny hafa, ny mpilalao izao dia ho afaka manova ny fiara novidiny ka hahatonga azy ireo ho tsara kokoa.
Ho fanampinny fanaingoana, ny fiara mahatalanjona toy ny CSR 2, izay efa misy fiara mahatalanjona maro, McLaren F1, Lamborghini Countach ary Saleen S7 Twin Turbo miaraka aminny fanavaozana ny Legends dia ho hita ao aminny lalao ary hatolotra ho anny rehetra.
CSR Racing 2 Specs
Haben'ny rakitra: 61.00 MB
Rush Rally 3 no lalao hazakaza-na rallye indrindra aminny finday. Manoro hevitra anao aho raha...
Te hilalao lalao hazakazaka azo tanterahana aminny sehatra finday ve ianao? Raha Eny ny...
Safidio ny fiara misy marika iraisam-pirenena toy ny Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford,...
Fast & Furious Takedown dia iray aminireo lalao finday natao ho anireo mpankafy ny...
Beach Buggy Racing 2 dia fanavaozana ny Beach Buggy Racing, ilay lalao hazakazaka kart # 1 misy...
Ny NASCAR Heat Mobile no hany hazakazaka fifaninanana NASCAR manana fahazoan-dàlana ahitana fiara...